Mootummaan Woyyaanee waadaa seene cabse - Walabu Media | Oromo News & Opinions
Home featured Mootummaan Woyyaanee waadaa seene cabse
Mootummaan Woyyaanee waadaa seene cabse
Hidhamtoota siyaasaa 115 qofatu hiikama
Mootummaan Woyyaanee hidhamtoota siyaasaa kumaatamatti laakkawaman keessaa 115 qofa akka gadi lakkisu ifa godhe. Akka ibsa Ob.Geetaachoo Ambaayeetti gadilakkifamuudhaaf ulaagaalee mootummaa federaalaan kaayaman kanniin guutan hidhamtoota 115 qofa. Hidhamtoonni kunniin roobii irraa jalqabee gadi lakkifamuu eegalu. Eenyummaa namoota gadilakkifamanii ob. Geetaachoo Ambaayee ammatti ibsuu hin barbaanne.
Yeroo ummanni biyyattii hidhamtoonni heddu ni lakkifamu jedhanii abdii guddaadhaan eeganitti hidhamtoota muraasa gadilakkisuudhaaf murteessuun isaanii waadaa seenan diiguudha.
Gama biraatiinis, hidhamtoota heddu waan gadilakkise fakkeessuudhaaf jecha hidhamtoota Naannoo Kibbaa (Konsoo fi Geede’oo) 413 gadilakkiseera. Woyyaaneen woliigalatti hidhamtoota 528 gadi lakkise jechuudhaan bu’aa siyaasaa, olola miidiyaa addunyaaf akka ta’utti dhiyeessuudhaan, argachuudhaaf carraaqaarti.
Xiqqaatus hidhamtoota siyaasaa kanniin Woyyaaneen akka gadilakkistuuf kan isii dirqe qabsoo Oromooti. Itti fuffiins qabsoo Oromoo hidhamtoota siyaasaa hafanis hiiksisuudhaaf hedduu barbaachisaadha. Hanga hidhamtoonni hundi hiikamanitti, haqni Oromoo kabajamutti, ol’aantummaan Woyyaanee cabutti, sirni dimokraasii fi federlaalizimii dhugaa mirkanaayutti qabsoon Oromoo itti fufuu qaba. Qabsoo oromooti kan hidhamtoota keenna hiiksisu, qabsoodha kan kabajaa dhabnes nuuf deebisu. Qabsoon itti fufa!
Previous articleHidhamtoonni siyaasaa hundi akka gadilakkifaman Haylamaaram Dassaalenyi beeksise
Next articleMagaalaan Ambo Dr. Mararaa fi qabsaayota hidhaa bayaniif simannaa oo’aa goote